New Island Paradise Mergui Archipelago: oghere eco-Resort
Home » Na-agbasa News Travel » New Island Paradise Mergui Archipelago: oghere eco-Resort
A na na, azụ na-eke resotu. Awei Pila, emeghere n’oge na-adịghị anya na agwaetiti Mergui ndị dịpụrụ adịpụ, n’akụkụ ụsọ oké osimiri nke ebe ndịda Myanmar na Thailand, na-enye nanị ịnọrọ onwe ya na ụkwụ efu dị mma nke ụkwụ ọtọ na ebe a na-emetọbeghị.
Ogige ntụrụndụ nke 5-kpakpando, yana ụlọ obibi iri abụọ na anọ nke dunes nke ọdọ mmiri 24m ogologo-creamy, bụ naanị ebe obibi n'àgwàetiti a na-emepebeghị emepe, na nnukwu agwaetiti dị omimi nke gara aga ruo ọtụtụ iri afọ.
Ndi ụlọ ọrụ na-eme njem nlegharị anya na Myanmar guzosiri ike, Memories Group nke nwekwara Balloons Over Bagan na Burma Boating, yana ụlọ nkwari akụ na Yangon, Loikaw, Mawlamyine na Hpa'an, Awei Pila nabatara ndị ọbịa mbụ na nso nso a. Onye isi njikwa Jon Bourbaud na-ekwu na ụsọ oké osimiri na ebe a na-eme ọhịa na-achọ ịnye akara aka ya pụrụ iche nke okomoko na-adigide, na-enye ndị ọbịa ebe ezumike pụrụ iche ma na-echekwa usoro ndụ nke agwaetiti ahụ.
Ebe etiti a bụ ebe a na-anabata ndị ọbịa yana ọdọ mmiri na-enweghị nsọtụ nke na-enye echiche dị ka nrọ si n'ofe ájá dị larịị gaa na mmiri doro anya nke Osimiri Andaman.
The resotu atụmatụ gbara gburugburu 'yurt-style' ákwà ụlọikwuu na-agbasasịkwa ebe nile nke ohia mmiri ozuzo, nke dị na ikpo okwu ndị a zụlitere na ebe dị ọdụ na ebe ịsa ahụ mmiri ozuzo na-enye ndị ọbịa ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ mita 60 nke oghere nkeonwe. Quirky n'uko Fans, zoro ikuku ntụ oyi, Bluetooth okwu, na a minibar ngwa nju oyi na-enye mmezi nkasi obi, ọ bụ ezie na oké ifufe ikuku, ojiji nke eke ihe okokụre, lemongrass spa ngwaahịa na vista nke ájá na oké osimiri na-enye ndị ọbịa Nature ndụ ezumike na revitalization.
A detox dijitalụ dịkwa, na enweghị ekwentị mkpanaaka dị n'ofe agwaetiti ahụ, n'agbanyeghị na ebe a na-enye wifi site na satịlaịtị ma nwee sistemụ ekwentị nke ime ụlọ. Awei Pila nwere mkpebi nke ịbụ ebe ezumike, yana ọtụtụ atụmatụ eco gụnyere mmemme ndị na-enye anyanwụ maka ọkụ eletrik, mmiri sitere na mmiri iyi, mmiri mkpuchi mmiri na coral na coral, na ahịhịa akwụkwọ na mmanya.
Onye na-ahụ maka mmiri na-ahụ maka mmiri bụ Marcelo Guimaraes, onye nnọchi anya Plastic-Free nkwa maka Myanmar, na-ekwu na ebe a na-eme njem na-arụ ọrụ iji bụrụ 100% plastic, na ndị ọbịa nyere karama aluminom nwere ike ịba. "Nanị akara ukwu anyị chọrọ ịmepụta bụ mgbe anyị jere ije n'akụkụ osimiri ndị a gbahapụrụ agbahapụ."
Nakwa isi North Beach na osimiri mmiri ya na-eji nwayọ nwayọ, ebe a na-ezo ebe okpomọkụ nwere coves ndị dị nso na bays maka snorkeling, paddleboarding, and kayaking, nwere nhọrọ maka ịbawanye mmiri. Guimaraes na-etolite ala na gburugburu ebe obibi na mmiri maka ndị ọbịa, yana nyochaa akuku mmiri na mangroves nke agwaetiti iji mata ụdị dị iche iche na ụzọ esi agba ume na nchekwa na nchekwa, gụnyere ndị ọkụ azụ Moken na Burmese.
Ndị otu na-agagharị agagharị na Moken, bụ ndị gbakọtara na iwe na agwaetiti ahụ ruo ọtụtụ narị afọ, nwere obere ndozi n'otu ọdụ mmiri dị nkeji iri anọ na ise site na ebe ezumike ahụ, ebe n'akụkụ hamlet bụ obodo buru ibu nke ndị ọkụ azụ na ndị ahịa Burmese. . Azụ na-achịkwaghị achịkwa, gụnyere ojiji nke dynamite na 'igbu' azụ na ịchụ nta na iwu na-akwadoghị nke ndụ mmiri maka ire ere na Thailand na mba ndị ọzọ Asia pụtara na belata ụfọdụ ụdị azụ. N'ihu ebe a na-eme njem ugbo coral coef iji weghachite coral ma meputa otutu ebe obibi maka azu.
Amachibidoro ịbanye Mergui Archipelago ruo etiti afọ 1990 mgbe a hapụrụ ohere ole na ole ụgbọ mmiri na-egwu mmiri ịbanye na mpaghara, nke dị nso na oke Thai na Myanmar. N'ime afọ ole na ole gara aga, gọọmentị Myanmar kwere ka agwaetiti ole na ole mepee nwere obere mmetụta, ebe ntụrụndụ pere mpe, ọ bụ ezie na ụgwọ ndị eze na-akwụ ụgwọ na-akwụ ụgwọ dị elu nke ịnye ọrụ niile na akụrụngwa maka ndị ọbịa nwere nghọta.
O nwere otu narị nkeji na iri ise site na ụgbọ mmiri ọsọ ọsọ site n'ọdụ ụgbọ mmiri Kawthaung ruo Awei Pila, ndị ọbịa si na mbụ bụ isi obodo Myanmar bụ Yangon ma ọ bụ gafee oke osimiri dị ukwuu site na obodo Thailand nke Ranong, na nso Phuket.
A na-emeghe ebe a na-eme njem site na October, rue Mee, na mpụga oge udu mmiri. Awei Pila, nke ga-arịọ ndị di na nwunye, ndị enyi na ndị na-achọ ebe mara mma na-esoghị igwe mmadụ ahụ na osimiri na-amaghị nwoke na mmanya na-aba n'anya mgbe anyanwụ dara, na-enye ugbu a abalị atọ nchịkọta ezumike nke ezumike niile na-eduga na ụbọchị Valentine, site na $ 1690
Enwere ike ịkwalite ọdụ ụgbọ elu Kawthaung n'ọdịnihu iji bulie ụgbọ elu si Thailand na ebe ndị ọzọ na Eshia. Enweghị ntụkwasị obi nke ọrụ ụgbọ elu n'etiti Yangon na Kawthaung pụtara na a dụrụ ndị ọbịa ọdụ ka ha rahụ na Kawthaung, ma ọ bụ mgbe anyanwụ dara 4-kpakpando Victoria Cliff, site na $ 73) ma ọ bụ 5-star ọhụrụ a rụzigharịrị ọhụrụ site na $ 85), nke dị n'ofe Kawthaung ke isuo.
Ọbịa na Awei Pila chọrọ e-visa (https://evisa.moip.gov.mm)
maka Myanmar, nke a na-enweta n'ụzọ dị mfe tupu $ 50 US.
More ọmụma: aweipila.com
Dọ aka na ntị: Lufthansa na-agba ndị njem akwụkwọ na-anwa ịnakọta karịa maka ụgbọ elu ndị emecharala
Oke na ịrị elu na Barbados: Mịnịstrị na-abanye
Delta Air Lines iji chọọ ụgwọ ọrụ ọhụụ ka agbatị ya na COVID-19
Gloria Guevara ka Julia Simpson dochie ya, dịka WTTC President & CEO
Ndị ụgbọ elu ga-enwerịrị mmekọrịta bara uru iji kwado nkwado gburugburu ebe obibi
Na Sandals Resorts nleta ndị ọbịa bara uru otu puku okwu
Princess Cruises kagburu ịhọrọ ụgbọ mmiri Mexico, Caribbean na Mediterenian
Brand USA na-eme atụmatụ njem International na United States
Pobeda ụgbọ elu na-amalite usoro ụgbọ elu zuru oke site na ọdụ ụgbọ elu Moscow Sheremetyevo